लागूऔषधसहित कोत्रेबाट तीनजना पक्राउ — donnews.com
लागूऔषधसहित कोत्रेबाट तीनजना पक्राउ
तनहुँ । ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौंतारा तनहुँको प्रहरी टोलीले लागूऔषधसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरी पोखराले दिएको जानकारी अनुसार दुईसय ८६ एम्पुल लगायत विभिन्न लागूऔषधसहित शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं. ४ कोत्रेस्थित गस्ती गर्ने क्रममा शंका लागेर चेकजाँच गर्दा पक्राउ परेका हुन् ।
यसरी पक्राउ पनेमा तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने २१ वर्षीय सन्तोष गुरुङ, शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने ३० वर्षीय मनोज क्षेत्री र गोरखा जिल्लाको आरुपोखरीथोक घर भई हाल तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं. २ हलेदी बस्ने वर्ष ३० का रवि गुरुङ रहेका छन् ।
ती व्यक्तिहरुबाट डाईजापाम १०४ एम्पुल, नुफिन ८९ एम्पुल र फेनरागन ९३ एम्पुल गरी जम्मा दुईसय ८६ एम्पुल लागूऔषध फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । पक्राउ परेका ती तीनैजनालाई लागूऔषध अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भईरहेको प्रहरी नायब उपरिक्षक राजेन्द्रबाबु रेग्मीले बताएको छ ।